I-Shemale Sex Doll - Ummeli weNtengiso oSemthethweni waMadoda kunye neTransny Sex Dolls
Thenga unodoli wokwabelana ngesondo okwenyani kwi-Intanethi
The oonodoli be-shemale sithengisa ziphuhliswe kwaye ziyilwe ngabavelisi abaziwayo. Banamabele amakhulu okwenene kwaye anomtsalane, ulusu oluthambileyo noluthambileyo, ubufazi obuyinyani, umngxuma wokukhupha ilindle kunye nomthondo oqhawukayo.Olu thando luhle unodoli wesondo weshemale uye wagqwesa indima yomntu wokwenyani, edibanisa imisebenzi yabasetyhini kunye namadoda. Ezi zidoli ze-transgender zenziwe nge-TPE ephezulu kunye nezixhobo ze-silicone, ezineempawu ezinjengomntu, zimenza abonakale njengomntu kwaye ikuvumela ukuba ufezekise i-orgasm.Iidoli zesini ze-Shemale ziza kuzo zonke ubukhulu kunye nemilo. Ke, ukuba uyawathanda amabhinqa atshintshatshintshayo, ukwindlela yokuzonwabisa. Uya kufumana oonodoli be-shemale abapheleleyo kunye nemizimba efana neyobomi enamapipi kunye namabele amnandi. Ngaphezu koko, awukwazi ukuba idoli ye-shemale ibonakala njani, unokujonga shemale sex doll ukubona ukuba ujongeka njani unodoli wesondo we-shemale, ezinye iimodeli zide zifakwe kwi-pussy kunye noKhetho lokutshintsha phakathi kweedikhi ukuze wonwabele ezona hlabathi zimbini ngonodoli omnye onjengobomi besini.Oonodoli bakaShemale zizinto zokudlala zesondo ezinkulu ezinokukunceda uphonononge imiba emitsha yobomi bakho bokwabelana ngesondo. Ezi zinto zokudlala ziza nento yomntu wonke - inkuku enkulu idildo yokugqobhoza, amabele amakhulu aqhawuke kwaye ujonge njengoko ugqobhoza kwaye ugqobhoza, itonela lokugqobhoza, kwaye abanye bade beze nezincamathelisi ze-pussy.
UOlivia-WM 166cm onobuhle onobuhle ohleli ebhedini ulinde uthando lwakho
Ingubo yomfundi we-Akili-156cm enamehlo amakhulu kunye noDoli oMhle woDoll onqamleze idesika
I-18CM Shemale Ubudoda besilisa oDoli boSini iDildo abicah Sex Toy
Oonodoli be-Shemale bobulili bunonga ubomi bakho bokwabelana ngesondo
Eyona nto imangalisayo ngoonodoli besondo be-shemale kukuba beza kunye namalungu abesilisa nabasetyhini. Zininzi kakhulu kwaye zilungile kumdlali omnye kunye nemidlalo yezibini. Baziwa ngokuba ngoonodoli abatshintshe isini. Ukuba ukhe waya Thailand kwaye wachitha ixesha ladyboys, uyazi indlela emangalisayo amava transsexual inokuba. Nangona kunjalo, akufuneki uye eThailand okanye kwamanye amazwe ase-Asia ukuze udibanise ngokukhululekileyo nabantu abadlulayo kuba unokufumana thanda unodoli kwaye bunonge ubomi bakho bobulili.
Kwimarike, uya kufumana oonodoli besondo be-transgender abapheleleyo, kunye noonodoli abanemizimba kuphela kwaye abangenamalungu. Ukuba uzimisele uku-splurge, uya kufumana oonodoli be-shemale abanobuso obuyilwe kakuhle, iinwele, amabele, iidick kunye neempundu. Ezinye zazo zide zibe ne-penis ezine-veins ukuze zikhangeleke ngokusondeleyo kwinto yokwenyani. Amathoyizi eShemale alungile kumadoda nabasetyhini.
Xa kuziwa kwi-shemale sex dolls, unokhetho oluninzi. Abanye banefemboy okanye i-transgender fantasy, ngelixa abanye betsalwa ngoonodoli bokwenyani be-transgender. Nangona ukhetho lokugqibela luxhomekeke kwiimfuno zakho, oonodoli be-transgender banokwahlulwa ngokwezi ntlobo zilandelayo ngokusekelwe kwizinto ezenziweyo kunye nokunikezelwa.Oonodoli bezesondo beShemale ngokwenyani - Njengoko igama libonisa, aba nodoli ngabona bafana nobomi. Banamabele okwenene kunye nepipi. Unokuqaphela iinkcukacha ezininzi ebusweni babo, iinwele kunye nemizimba. Unodoli wesondo we-shemale luhlobo olukhethekileyo Unodoli wesini waseJapan. Ezi zisekelwe kwiimpawu ze-anime kwaye zibhenela abo bathanda i-hentai okanye i-anime cartoons yaseJapan. Aba nodoli beza needikhi kodwa banemizimba yobufazi. Iinwele zabo zinokuba nemibala emininzi ukuze zifane nabalinganiswa be-anime.
Unodoli weShemale wenyani wangaphambili
I-Silicone Shemale Doll-I-Silicone Shemale Sex Doll yomelele kakhulu, ithambile kwaye iguquguquka. Zinokugcinwa okuphantsi kwaye kulula ukuzicoca. I-TPE Transgender Sex Dolls - Iidoli ze-Shemale ezenziwe nge-TPE okanye i-elastomer ye-thermoplastic zifuna ukunakekelwa ngakumbi kunoonodoli be-transgender bezenziwe nge-silicone, kodwa baziva benyanisekile. Bade beze namalungu omzimba anokushukunyiswa kwaye ashukunyiswe.Oonodoli be-Shemale banokuba ngabona bafikelelekayo, kodwa abekho ixesha elide okanye abenyani. I-Shemale Doll Torso - Ukuba awukhangeli unodoli we-shemale opheleleyo, unokujonga i-Shemale Doll Torso. Aba nodoli yimizimba nje enamabele kunye namalungu angasese, kodwa abanawo amalungu. Nangona kunjalo, unokufumanisa ukuba i-torso ye-shemale doll ijonge phezulu.
Iimpawu eziphambili zeShemale Doll
Ziziphi iimpawu eziphambili zedoli ye-shemale? Unodoli we-shemale wenziwa ngerabha ethambileyo, ekhuselekileyo emzimbeni ekhululekileyo ekuchukumiseni kwaye inika imvakalelo efana nobomi. Iinwele ngokuqhelekileyo zenziwe ngezinto zokwenziwa, kodwa zikhangeleka ngokwenene. Oonodoli abanobuso bakholisa ukuthambisa ubuso ukuze babonakale njengabantu bokwenyani abatshintshe isini. Oonodoli be-Transgender sex benokwahluka ngombala wolusu, kwaye uya kufumana oonodoli be-shemale abanebala elimnyama, ulusu olumhlophe, okanye ulusu olusukiweyo. Basenokuba neempawu zaseAsia. Oonodoli be-Shemale beza ne-dildo efana nepipi yokwenyani kwaye yenziwe ngeebhola, iintloko kunye nemithambo. Ubude belungu lobudoda bunokwahluka, kodwa i-shaft ihlala i-avareji ye-7 ukuya kwi-9 intshi. Amabele okwenene ayinto ebalulekileyo yoonodoli be-shemale. I-bust yisayizi yekomityi ye-C, i-elastic kwaye ithambile. Baziva ngathi ziibhobho zendalo. Abanye oonodoli beshemale bade beze nezincamathelisi ukuze ukwazi ukutshintshiselana ngelungu lobudoda bakho.
Indlela yokusebenzisa unodoli we-silicone shemale ngokuchanekileyo?
Unodoli we-Silicone shemale sex. Oonodoli besini beTransgender banezinto ezininzi, bamnandi kwaye bayamangalisa. Unokuzisebenzisa xa uwedwa kwaye ufuna ukuba kufutshane nomntu. Kungenjalo, ezi nodoli zingasetyenziswa ekudlaleni ngokubambisana ukuthatha ukudibana kwakho ngokwesondo ukuya kwinqanaba elilandelayo. Indlela ofuna ukuyisebenzisa ngayo unodoli we-shemale lukhetho lwakho lomntu. Nangona kunjalo, nanga amanye amacebiso onokuthi uwathathele ingqalelo ekutyebiseni amava akho esondo. Kakhulu, oonodoli be-shemale benziwe ngerabha okanye i-silicone, kwaye uya kufuna lube. Isisombululo esigqibeleleyo kukusebenzisa ilube esekwe emanzini njengoko ayincangathi kwaye ihlamba ngokulula. Kwakhona, azichaphazeli. Ngaba usebenzisa oonodoli beshemale kumdlali omnye? Ukuba kunjalo, yibeke ngokuqinileyo ukuze ingahexeki xa uzigqobhoza okanye ufaka incanca yakho kuyo. Ukuba unodoli awuqiniswanga ngokukhuselekileyo, awuyi kukwazi ukulawula ukunyakaza.
Oonodoli besondo beTransgender banokusetyenziswa xa izibini zidlala okanye xa zilala namaqabane amaninzi ngaxeshanye. Ingasetyenziswa ngexesha lokudlala indima. Ukuba uziva ungaqhelekanga ukuba neentlobano zesini nonodoli, unokubukela iphonografi okanye uthethe neqabane lakho lomgama omde ngefowuni. Iidoli zesini zeShemale zinokusetyenziswa kangangoko ufuna. Into oyifunayo yintelekelelo encinci. Ke, zifumanele enye kwaye uvumele ulonwabo luqale.